Sony Open isan-taona faha-20 any Hawaii dia nahasarika mpitsidika 50,000 XNUMX
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Sony Open isan-taona faha-20 any Hawaii dia nahasarika mpitsidika 50,000 XNUMX
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Sports • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny Sony Open 2018 dia nanomboka ny 10 Janoary tao amin'ny Waialae Country Club any amin'ny nosy Oahu; natokana ho an'ny fiarahana Pro-Am ny andro. Afaka nanolotra fanomezana ho an'ny fiantrana i Amateurs ary nilalao tamin'ireo kintana golf matihanina. Ny toetr'andro dia tokony ho faty. Sarotra ny hino fa volana janoary izy, nilentika ny masoandro ary nisy rivotra malefaka avy tany an-dranomasina. Nanomboka tonga tamin'ny 6 maraina ny olona mba hijery ny mason'ireo mpilalao tiany indrindra. Ny iray amin'ireo kintana voalohany amin'ireo maintso dia Justin Thomas.
Thomas efatra amby roa-polo taona dia nisokatra tamin'ny isa 59 tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ny Sony Open 2017 izay lasa zandriny indrindra nandra 60 tamin'ny PGA TOUR tamin'ny 4 taona. Nanohy nandrombaka ny amboaram-boninahitra Sony Open 2017 tamin'ny alàlan'ny tifitra fito izy, nanapotika ny firaketana ny isa 72-lavaka TOUR tamin'ny isa 27-ambanin'ny 253. Justin Thomas dia namarana ny vanim-potoana 2017 ho an'ny "Player of the Year" an'ny TOUR miaraka amina fandresena dimy ny Tompondakan'ny PGA, ny titre vola ary ny bonus 10 tapitrisa $ amin'ny fandresena ny amboara FEDEX. Niverina tamin'ny Sony Open 2018 tany Hawaii izy hiaro ny lohany.
Fotoana fohy taorian'ny mitataovovonana dia nilalao ny taranja i Jordania Spieth, niaraka tamin'ny mpanome asa soa maro. Ny tarika mpankafy azy dia nahitana ilay mpihira tarika zazalahy Nick Jonas sy mpilalao sarimihetsika Kelly Rohrbach. Raha ny voalazan'ny bookies any London, England dia antenaina handresy amin'ny fifaninanana amin'ity taona ity izy, izay manomboka ny 11 ka hatramin'ny 14 janoary dia antenaina hahazo ny laharana faharoa i Thomas.
Tsindrio eto raha hijery horonan-tsary.
Maty mafy ny ankamaroan'ny mpilalao rehefa milalao fifaninanana; mifantoka amin'ny lalao izy ireo ary tsy misy olona mahazo miresaka amin'izy ireo - mety hanelingelina izany. Na izany aza, tamin'ny hetsika Pro-Am, i Jordan Spieth dia toa tsy dia tia an'i Kelly Rohrbach ary niresaka mivantana taminy. Nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversite Georgetown izy tamin'ny 2012, toerana nanangonana azy hilalao Diviziona Folo Golf vehivavy, avy eo nifindra tany Los Angeles izy mba hanaraka ny fitiavany hanao zavatra. Kelly dia nirotsaka tamin'ny teatra tao Georgetown, ary nanatrika ny London Academy of Music and Dramatic Art ihany koa. Rohrbach dia kintana vao haingana tamin'ny sarimihetsika Paramount Pictures Baywatch (2017).
Ny mpitsidika an'i Waikiki dia afaka manatrika ny hetsika amin'ny $ 25 isan'andro, na $ 60 amin'ny fifaninanana iray manontolo. Ny miaramila sy ny miankina rehetra dia ekena maimaimpoana miaraka amina ID miaramila ofisialy. Ny bus 22 dia mankeny amin'ny Sony Open ao Waialae Country Club; ny làlana dia manomboka amin'ny araben'i Kalakaua, eo amin'ny sisin'ny tendrombohitra ny paositra any Waikiki. Ny bisy fitateram-bahoaka rehetra dia tia seza misy kodiarana.
Misy seza misy kodiarana azo alefa ho an'ny Sony Open izay soloin'i E Noa Tours. Manomboka ao amin'ny Hilton Hawaiian Village izy io, ary mamakivaky an'i Waikiki alohan'ny hahatongavany amin'ny fifaninanana. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny ora fitateram-bahoaka dia mifandraisa amin'ny biraon'ny fandefasana amin'ny 808-593-8750.
Ny toerana fialan-tsasatra natokana ho an'ny mpijery sembana na sembana dia eo amin'ny fiantsonan'ny Pro Shop mifanila amin'ny vavahady lehibe.
Avelao any aoriana ny kitaponao, fakan-tsary ary kitapo. Tsy misy gony rongony lehibe mihoatra ny 6 ”x 6” x 6 ”; tsy azo avela ny kitapo tote, plastika, vinyl na entana mitondra mazava lehibe kokoa noho ny 12 "x 6" x 12 ″.
Manangona $ 17 tapitrisa mahery ho an'ny fikambanana mpanao asa soa 350 any amin'ny Nosy Hawaii. Nalefa tamina trano maherin'ny 560 tapitrisa tany amin'ny tany sy faritany 220 teo ho eo tamin'ny alàlan'ny tambajotran-pirenena sy iraisam-pirenena marobe, ary manome vola mitentina 100 tapitrisa dolara eo amin'ny marketing sy ny fiantraikan'ny toekarena any Hawaii.
Araho ny mpanoratra, Anton Anderssen, Eto.